दुर्घटनामा दुईको मृत्यु - विवेचना
June 25, 2018 1,348 Views
बुधबारे, असार ११ । मेची राजमार्गको बुद्धशान्ति ३ अन्तर्गत फेदी होटलनजिक आइतबार दिउँसो भएको सवारी दुर्घटनामा एकजनाको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको छ ।
मृत्यु हुनेमा बुद्धशान्ति ४ का २४ वर्षीय लक्ष्मण खतिवडा रहेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बिर्तामोडले जनाएको छ । इलामबाट झापातर्फ आइरहेको बा. १ क ६५८१ नम्बरको टिप्परले सोही दिशातफआउँदै गरेको मे. ७ प ४१८२ नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा मोटरसाइकलमा सवार खतिवडाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो । मोटरसाइकलमा पछाडि सवार बुद्धशान्ति ४ का २५ वर्षीय साहिर शेर्मा लिम्बू घाइते भएका छन् । उनको बिर्तामोडस्थित बिएन्डसी अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । ठक्कर दिने सवारीलाई इलाका प्रहरी कार्यालय बुधबारेले नियन्त्रणमा लिएको छ भने चालक फरार रहेका छन् ।
यसैबीच, सुनसरीको सदरमुकाम इनरुवास्थित पूर्वपश्चिम राजमार्गमा शनिबार राति भएको सवारी दुर्घटनामा एकजनाको ज्यान गएको छ । अर्का एकजना घाइते भएको पूर्व क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इटहरीले जानकारी दिएको छ । प्रहरी कार्यालय इटहरीका ट्राफिक प्रहरी सहायक निरीक्षक टड्ढ न्यौपानेका अनुसार सदरमुकाम इनरुवामा मे. १ ज १९८६ नम्बरको सवारीले को. २३ प ४०९७ नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा सोही मोटरसाइकलका चालक इनरुवाका ३५ वर्षीय योगेन्द्र उरावको मृत्यु भएको हो ।
यसैगरी, आइतबार बिहान सुनसरीको सदरमुकाम इनरुवाबाट पूर्वतिर आउँदै गरेको को. १ च ८२८३ नम्बरको पिकअपलाई सोही दिशाबाट पछाडि आउँदै गरेको ना. २ च ५९३ नम्बरको एम्बुलेन्सले ठक्कर दिँदा एम्बुलेन्समा यात्रारत धनकुटा निवासी ६० वर्षीय गोविन्द थापा घाइते भएका छन् । घाइते थापाको जिल्ला अस्पताल इनरुवामा उपचार भइरहेको बताइएको छ ।
ठक्कर दिने दुवै सवारीसाधनलाई आवश्यक सोधपुछ एवम् अनुसन्धान गरी कारबाही अघि बढाउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय इनरुवाले नियन्त्रणमा लिएका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इटहरीले बताएको छ ।
Previous मलेसियामा बस दुर्घटना, ३६ नेपाली कामदार घाइते
Next भारतीय नागरिकसँग नेपाली लाइसेन्स !
Pingback: test fisiologia
Pingback: re lear personaggi
Pingback: киста мозга
Pingback: dvs sindrom
Pingback: diskinezija zhelchevyvodjashhih putej
Pingback: что такое бренность
Pingback: reinhard mey das meer
Pingback: La famigliaela società
Pingback: Epiteli di rivestimento